Iqonga leeNkonzo zeMixholo ye-GRM: Ukuzisa ubukrelekrele kwiinkqubo zakho zeshishini | Martech Zone
Amaqonga oLawulo loMxholo woShishino (i-ECM) ayaqhubeka nokuqhubela phambili neminikelo yabo, ingabi ziindawo zokugcina amaxwebhu kuphela, kodwa enikezela ubukrelekrele kwiinkqubo zeshishini. Iqonga leeNkonzo zeMxholo weGRM (CSP) lingaphezulu kwenkqubo yolawulo lwamaxwebhu. Sisisombululo apho kunokwenziwa amaxwebhu anokwabiwa kwaye emva koko ukusebenza kungaphuculwa. I-CSP yeGRM ivumela iifayile ze- Inkqubo yolawulo lomxholo (CMS) ukudibanisa uhlalutyo lwedatha, ukufunda ngomatshini, ukubamba idatha ekrelekrele, kunye nesoftware ye-DMS yokulawula amaxwebhu, ukulandelela ingxelo, amanqaku okhuseleko lwetekhnoloji ephezulu, enobuchule yolawulo lwenkqubo (BPM) kunye Isoftware yoLawulo lokuSebenza (WMS).
Zininzi ii-acronyms ezinobumba abathathu!
Iimpawu zeQonga leeNkonzo zeMxholo zeGRM zibandakanya:
Ngokuzenzekelayo kunye neenkqubo Stlineline -Imisebenzi yemihla ngemihla yeshishini njengokuthenga okanye ukuhlawulwa kwamabango kuhlala kungumgaqo, kuthanda ukulibaziseka kunye neempazamo, kwaye kuhlala kudala iingxaki ezinkulu xa ususwe idreyini. Ngeenkonzo zomxholo weGRM, unokuzenzekelayo ngokulula kwaye uhambise iinkqubo ezinjalo. I-CSP yethu ilandelela yonke imisebenzi yabasebenzisi kunye nohlaziyo lwamaxwebhu njengoko edityaniswa ngexesha langempela, kwaye inyusa phambili ukuqhubela phambili kokugqitywa kwemisebenzi ebalulekileyo.
Inkqubo yoLawulo loMxholo weShishini- iqonga labo leenkonzo ezinomxholo yinkqubo yolawulo lweshishini eqhutywa yi-AI ekhupha kunye neenkqubo zedatha engacwangciswanga, nokuba ivela kwiinkqubo zelifa, kwaye iphucula iinkqubo zeshishini. Sigqithile kwindlela yokutyikitya ngombane. Yi-CSP eyilelwe ukwenziwa okungapheliyo kweenkqubo zeshishini kunye nokufikelela ekuhambeni, nakwizixhobo eziphathwayo.
Uxwebhu lobomi ulawulo -I-GRM ibonelela ngeseti epheleleyo yeenkonzo zolawulo lwamaxwebhu ezinokuhambisa kunye nokuguqula iifayile zamaphepha zibe ngamaxwebhu edijithali, ukukhupha idatha, ukwahlula iirekhodi, nokuzenza zikulungele ukusebenzisana kwiinkqubo zeshishini lenkampani yakho. Into ebikade ithatha iiyure ngoku ifezekisiwe ngemizuzwana. Ngelixa sele ulawula iinkqubo zokuhamba komsebenzi, qiniseka ukuba zonke iirekhodi zakho zigciniwe ngokukhuselekileyo kwindawo yokugcina amafu okanye kwindawo yokugcina amaphepha asephepheni, afikeleleke nanini na xa ufuna.
I-GRM yomelele, esekwe kwilifu iqonga leenkonzo zomxholo (CSP) yinkqubo ye-agile kunye ne-scalable system equlathe iseti yezixhobo kunye nezakhono ezinceda amashishini ukuba athathe ulawulo lwedatha-ayicwangcise kwaye ayisebenzise ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Phakathi kwezo zinto zinokubakho yi-Actionable Analytics, umsebenzi we-analytics oqikelelweyo obonelela ngokuqonda okwenyani ukuze abasebenzisi bakwazi ukubona ngokukhawuleza imiba enokubakho kunye namathuba, kwaye bayiphathe ngokufanelekileyo.
Ulawulo loLwazi lweGRM ngumboneleli ophambili weenkqubo zolawulo lolwazi. Iqonga leenkonzo zomxholo ezomeleleyo ze-GRM zisebenza njengendawo ephambili kwizisombululo zedijithali ezibonelelwa ngabaxhasi bayo. Ukusebenza kwamacandelo ohlukeneyo amashishini afana nokhathalelo lwempilo, urhulumente, ezomthetho, ezemali kunye nezabasebenzi, i-GRM ihambisa iinkonzo zayo kubaxhasi njengokuguqulwa kwedijithali, izisombululo zedatha eziphambili, iinkqubo zolawulo lwamaxwebhu, ukuzenzekelayo kokuhamba komsebenzi, ukugcinwa kwedatha yelifa, ukuthotyelwa nolawulo, ishishini Inkqubo yolawulo kunye namandla okuhlaziya aphezulu, kunye nesuti epheleleyo yokugcina uxwebhu, ukuskena kunye neenkonzo zolawulo lweerekhodi zomzimba.
tags: iinkqubo zeshishiniukugcinwa koxwebhu lwamafuCMSIqonga leeNkonzo zoMxholocspUhlalutyo lwedathaisoftware yolawulodmsUxwebhu olugciniweyoECMUlawulo lokuqulathiweyo kwamashishinigrmukubamba idatha ekrelekreleyokufunda umatshiniuxwebhu lwephephaUkulandela umkhondoIinkqubo zokuhamba komsebenzi